Carl-Henry-GlobalWaxaan ku qaatay noloshayda oo dhan, ilaa markii aan jiray 12 sano, dhisidda meheradaha oo aan lacag ku kasbaday ganacsade ahaan halkii aan shaqaale ahaan lahaa. Tan iyo 1st ee Bishii Luulyo 1978 waxaan si aad ah uga shaqeeyay inaan sii joogo “shaqo la’aan”.
Marnaba ma joojin waxbarashada barashada suuq-geynta ugu dambeysa iyo baaritaanka warshadaha kala duwan, si aad u ogaato meesha guulaha dhaqaale laga heli karo, shuruudaha gaarka ah.
Tirada ugu dambaysa, waxaan ka shaqeeyay warshadaha 39
Ganacsiga aasaasiga ah waxaa loo yaqaannaa Carl Henry Global. Taasi waxay leedahay qaybo badan oo ganacsi oo ka shaqeeya adduunka oo dhan, waxaan sidoo kale heysanaa shirkado ku salaysan dhowr waddan.
Meelaha ugu muhiimsan ee ganacsiga diiradda lagu saaro cinwaanada 5; Maaliyadda, Estate Real (Hanti), Internet (Suuq-geynta Dijital ah), Corporate iyo nololeedka. Dhamaan nolosha iyo ganacsiga ayaa si xeeladaysan u xiri kara cinwaanada 5.
Ujeedadayadu had iyo jeer waxay ahayd in la abuuro urur buuxa oo iskaa wax u qabso oo leh dhamaan xirfadaha iyo khayraadka loo baahan yahay si loo furo, loo taageero, loona maamulo oo loo fidiyo suuq-geynta internetka si kasta oo kasta oo ganacsi ama mashruuc, gaar ahaan haddii uu leeyahay awood ballaaran oo dijitaal ah .
Iyada oo qayb ka ah nooca ganacsiga ah ayaan go'aansanay
si ay u caawiyaan dadka kale Tababar iyo fursado ganacsi
Waxaan ka jareynaa dhammaan wacdinta wacdinta annaga oo ah xamaasad been ah isla markaana aan u karkarinno macluumaadka aad u baahan tahay, tallaabooyin deg deg ah oo toos ah oo aad ku qaadi karto "Hada" si aad u sameyso isbeddelada noloshaada ee loogu baahan yahay inay kugu kiciyaan xaalada saxda ah iyo qaab nololeedka meesha aad dareento ku farax.
Aasaaska arrimahan oo dhan waa inay awood u yeeshaan inay lacag ku sameystaan ​​qaab lagu taageerayo nooca hab-nololeedka aad rabto; Waxaa la yiri haddii aad ka dhigto damac ama hiwaayad ka timaadda isha dakhligaaga weligaa “kama shaqeyn doontid” maalin kale noloshaada!
Ilaa iyo intii aan xasuusto dabciga iyo hiwaayadeyda ayaa ahaa abuurista fursadaha ganacsiga, siyaabaha loo lacag online iyo raacitaanka hab nololeedka ugu fiican. Faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view. hadda!